Ụkwụ Ụkwụ Ụgbọ ala, Ndị na -ebunye ya - China Car Foot Mat Manufacturers
Ntinye ụlọ nrụpụta akpaaka akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ Bensen nke PVC bụ akụ na ụba yana ihe akpụkpọ anụ dị mfe nhicha yana ọ dị mfe iwepu na dochie ya.
Ezi mma TPE ụgbọ ala ala maka ụgbọ ala
TPV ihe nchekwa nchekwa ihe nchekwa ụgbọ ala ụgbọ ala agabigala asambodo ROHS10 nke ụlọ ọrụ EU SGS, asambodo formaldehyde. Yabụ mgbe ha na-anya ụgbọ ala n'ime oghere ịnya ụgbọ ala dị warara, onye na-azụ ahịa nwere ike ịnụ ụtọ enweghị isi, ịdị mma, gburugburu ebe dị mma.
TPE na -adịgide adịgide ma na -echebe akpụkpọ ụkwụ ụkwụ ụkwụ nwere agba ojii
Akpụkpọ ụkwụ ụkwụ TPE nke Bensen adịghị egbu egbu, enweghị isi, yana ule FDA, nke na-eme ha ngwaahịa echekwara nke ọma maka ndị na-azụ ahịa ka obi sie ha ike.
Bensen Custom Fit Floor Mats 2 Ahịrị Liner Set Black
A na -ahazi akwa ụkwụ TPE nke Bensen mere dịka ụdị ụgbọ ala ị na -enye, ọ gaghị egbochi breeki gas gas, wdg, na -ebelata ihe egwu dị na akwa ụkwụ ụgbọ ala.
TPE Igwe ihu igwe ụgbọ ala ihu igwe niile
TPE Floor Mats maka Omenala emere maka ime ụlọ
China Factory Direct Sale TPE Ụkwụ Ụkwụ Mats with Good Price
Bensen na-eme nchekwa dị elu-TPE na-enweghị mmiri (thermoplastic elastomer) rọba nwere oke oke nke na-enyere aka igbochi snow, mmiri, nnu, ájá na apịtị ka ha ghara imetọ kapeeti. TPE roba na -eguzogide ihu igwe ma na -arụ ọrụ nke ọma na ihu igwe ọ bụla, ọbụlagodi n'oké oyi.
TPE ụgbọ ala dị elu dị elu nwere ọnụ ahịa ụlọ ọrụ
Ngwaahịa ụgbọ ala na-eme mkpọtụ nwere ihe TPE